ठूलो क्षमता कूल धुंध आवश्यक तेल Aromatherap विसारक China Manufacturer
विवरण:कूल धुलाइ अरोमाथेरापी विसारक,कूल धुवाँ आवश्यक तेल विसारक,कूल धुलाइ तेल विसारक
Home > उत्पादनहरू > घर विसारक > ठूलो क्षमता कूल धुंध आवश्यक तेल Aromatherap विसारक
मोडेल संख्या: DT-1858
[धुंध समायोज्य डिफ्यूजर] यो गन्ध समायोज्य प्रकार्यको साथ सुसज्जित डिफ्यूजर, जुन अन्य उत्पादनहरू भन्दा धेरै भिन्न छ। तपाईं उच्च / तल्लो बटन होल्ड गरेर झुकिको स्तर समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै सजिलो र फेसन। यदि शयनकक्ष वा कुनै अन्य औसत आकारको कोठामा प्रयोग गर्दै, यसले वास्तवमा ओसको तहमा मद्दत गर्दछ: सुख्खा मुख, ओठ, आँखा छैन।
[मल्टि-फंक्शन डिफ्युजर] ml०० मिलि एसेन्शियल तेल डिफ्यूजर सानो एयर ह्युमिडिफायर र अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं यस तेल विसारकको साथ प्रयोगको लागि केहि आवश्यक तेलहरू राख्न सक्नुहुनेछ, र यो राम्रो काम गर्दछ! एक दुई मात्र ड्रप, तपाईंको कोठा धेरै राम्रो गन्ध छ। यसले रातको उज्यालोको रूपमा पनि काम गर्दछ, तपाईं र तपाईंको बच्चालाई आरामदायी घर ठाउँ र सुरक्षित रातको निद्रा प्रस्ताव गर्दछ।
[अद्वितीय र स्टाइलिश डिजाइन] डिटुओ अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायर कटोरी आकारको डिजाईनको साथ जुन उत्तम र उत्तम देखिन्छ, यो व्यावहारिक रूपमा आफैंमा एक सानो सजावट हो! यो पनि सुपर शान्त छ, र रमाईलो रंगको बत्तीहरू छ। यो वास्तवमा राम्रो देखिन्छ, प्रकाश र धुवाँको प्लीमबाट माथिबाट आउँदैछ।
[समय सेटिंग्स र स्वत: अफ] यो घर humidifier पानी को लागी एक ठूलो क्षमता छ, ताकि यो आफ्नो अधिकतम क्षमता संग १२-१-14 घण्टा सम्म रहन सक्छ। १,,, hours घण्टा को लागी सेटिंग्स को लागी वा तपाइँको आवश्यकताहरु को लागी निरन्तर सुइट, र एक सुरक्षा सुविधा छ कि यदि पानी सकियो भने मशीन स्वचालित रूपमा बन्द हुन्छ।
कूल धुवाँ आवश्यक तेल विसारक चित्रहरु:
चिसो धुंध अरोमाथेरापी विसारक अपरेशन:
शीत धुन्ध तेल विसारक अनुप्रयोग:
आवश्यक तेल अरोमाथेरापी ह्यूमिडिफायर आवश्यक विसारक अब सम्पर्क गर्नुहोस्
अरोमाथेरापी अत्यावश्यक तेल डिफ्यूजर कूल धुने पोर्टेबल अब सम्पर्क गर्नुहोस्
कूल धुलाइ अरोमाथेरापी विसारक कूल धुवाँ आवश्यक तेल विसारक कूल धुलाइ तेल विसारक